‘यो जस्तो वन्छु हैन, आफ्नो पहिचान छुट्टै वनाउनेहो’-Nagarikaawaj.com
‘यो जस्तो वन्छु हैन, आफ्नो पहिचान छुट्टै वनाउनेहो’
गौरव पहारी एकाएक चलचित्र क्षेत्रमा जम्दै गएका नायक हुन । प्रमाण मन्जरी र होस्टेल मात्रै हैनन् केही समय अघि मात्रै छायाँकन सकेको उत्सव र छायाँकनमा जान लागेको अर्धकट्टी पनि छन । निकै आकर्षक अभिनयले गौरवलाई यो क्षेत्रमा टिकाउने संकेत गरेको छ । वरिष्ठ चरित्र अभिनेता टीका पहाडीका जेठा छोरा गौरव बाबुको प्रेरणाले कलाकारितामा प्रवेश गरेको वताउँछन । भारतमा अभिनयको क्लास सकेर मन्जरीवाट कलिउडको ठुलो पर्दामा प्रवेश गरेका नवलपरासीका उनै गौरवसँग रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको अन्तरकुन्तर कुराकानी । संः
फोहोरी केटा कलिउडमा जमेकै हो ?
– हाहाहा, जम्दै गएको हो भनौ न । तर जमिसकेको चाहि नभनौ । तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा राम्रो कलाकार वनेर देखाउनेछु ।
तपाई वलिउडपनि केही साना ठुला फिल्म गर्नुभएको हो ?
– गायक उदितनारायण झाका सालो आनन्द गहतराज निर्देशित भोजपुरी भाÈाको फिल्म कानुन हमार मुठीमे लगाएत भारत बसाइका क्रममा केही टेलिविज्ञापनमा समेत अभिनय गरेको थिए ।
तपाईको ईक्षा वुवालाई थाहा थियो, कलाकार वन्छु ।
– वुवालाई थाहा थियो । म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्न चाहान्थे । तर बुबाले गा्रजुएसन सकेपछि मात्र लाग्ने सल्लाह दिनुभएको थियो । त्यसकारण मैले पढाइलाई प्राथमिकता दिएँर यहि अधययनमा लागे । भारतको पुनाबाट गा्रजुएसन गरेपछि मलाई वुवालेनै अभिनय प्रशिÔका लागि किशोर नमितकहा“ भर्ना गरिदिनुभयो । बुबालाई मेरो लक्ष्य थाहा थियो । त्यसकारण मैले ग्राजुएसन सकेपछि उहा“ले नै लगेर एक्टिङ क्लास ज्वाइन गरिदिनुभएको हो । कलाकारीतामा लाग्न बुबाको ठूलो सहयोग छ ।
धेरैलाई गौरव नाम मुखाआखर हुनै थाल्यो, तर थोरै भनिदिनुसन नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कसरी आउनुभएको थियो ?
– सिधा भन्नुपर्दा म भारतमा क्लास सिक्दै गर्दा निर्देशक गर्णेसदेव पाण्डेले चिन्नुभएको थियो । उहाले मलाई प्रपोज गर्नुभयो चलचित्र मिल्दो छ खेल्नुस भनेर । त्यसपछि मन्जरीवाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पाईला चालेको हुँ ।
जिन्दगीमा सवैभदा ठुलो खुसी ?
– जिन्दगीमा धेरै छ खुसी अनि त्यत्तीकै दुःखका अनुभव पनि । मेरो रगतमै कलाकारीता थियो सानैदेखी । त्यसो भएकाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यहाँसम्म आउन वनाउने चलचित्र मन्जरी हो । जसका लागी गर्णेसदेव पाण्डेले मलाई अफर गर्नुभएको थियो । त्यहीनै अलिक ठुलो खुसी हो । जहाँ फोहोरी केटा वाट अहिले पनि चर्चित वनेको जस्तो लाग्छ ।
त्यसो एउटा दुःखको अनुभव पनि वताईदिनुसन ?
– दुःख पनि यहि चलचित्र क्षेत्रमानै छ । कुनै वेला भारतमा मैले परिश्रम निकैनै गरेको थिए । कहिले काम पाईन्थ्यो कहिले काम पाइदैनथियो । यो क्षेत्रमा धेरै त्यस्ता दुःखका अनुभव छन जो भनेर सकिदैन ।
एक्टिङ वाहेक अरु क्षेत्रमा सोचाई छैन ?
– नाई । म भनिसके । अरु कुनैपनि सोचाई छैन । वुवा पनि यसै क्षेत्रमा भएको कारणले मलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न सहज वनिदिएको छ ।
कुन कलाकार जस्तै वन्छु भन्नुभएको छ ?
– धेरै जसो कलाकारहरु सुरुमा कुनै एउटा कलिउड वलिउडमा जमेको कलाकार जस्तै वन्छु भनेर अगाडी वढ्छन् । तर मेरा लागी चाहि त्यस्तो छैन । मात्रै म गौरव पहारी छुट्टै पहिचान वनाउने लक्ष्य छ ।